कार्यान्वयन भएमा बजेट सकारात्मक : निजी क्षेत्र «
कार्यान्वयन भएमा बजेट सकारात्मक : निजी क्षेत्र
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको आय तथा व्ययको विवरण (बजेट) प्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ । विगतका सरकारहरूले ल्याउने बजेटभन्दा केही मात्रै फरक भएको बताउँदै कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अधिकारीहरूले बताएका छन् । औद्योगिकक्रान्ति, लगानीमैत्री वातारण र युगान्तकारी परिवर्तनको र देशमै रोजगारीका उच्चतम सम्भावना खोज्ने विषयमा भने बजेट मौन रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्दै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने बताएको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै आएको समयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । “उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ, तोकिएको समयभित्र उत्पादन थाल्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । नेपाली उत्पादनको बजारीकरण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली नियोगहरूको उच्चतम प्रयोग गरिने भन्दै नेपाली औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिनेसमेत उनले घोषणा गरेका छन् ।
दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे
अगामी दुइ वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ संरक्षण दिइने छ । जुट गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्यमशीलता बढाउने कार्यक्रमहरूमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण दिनेछ । ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले नेपालमा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पनि पाउने व्यवस्था छ । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, भवानी राणाले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको भन्दै सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताइन् । “आयातलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महासंघले दिएका सुझावहरू समावेश भएका छन् ।” उनले भनिन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले १ अर्ब भन्दा धेरै पुँजी भएको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा जानुपर्ने बाध्यतक व्यवस्थाप्रति भने चुनौती रहेको बताए । “समाजवाद उन्मुख बजेट भनिएकाले होला सहकारीभन्दा निजी क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको छ,” उनी भन्छन् ।
बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जसरी उद्योग क्षेत्रका लागि युगान्तकारी बजेट आउला भनेर अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन नसकेको बताए । “विगतका वर्षको बजेटभन्दा थोरैमात्रै फरक होला तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ,” उनी भन्छन् । सम्पूर्ण उद्योगका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएमा र साधारण खर्च घटाउन सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष समग्रमा सकारात्मक भएको बताए । बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । कृषि, बिमा, कर्मचारी, युवालाई ऋण दिने सकारात्मक छ । “बजेट पढेअनुसार कार्यान्वयन भएमा बजेट राम्रो छ,” उनले भने ।
१ अर्बभन्दा माथिका उद्योगमा अनिवार्य आईपीओ
निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई व्यवसाय गर्न १० लाख ऋण
सामूहिक महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाखसम्मको ऋण
एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न संरक्षण गरिने
आगामी वर्ष २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकास
सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, सेज